DAAWO-Puntland oo ciidamo tababar ugu soo xirtay Xarfo & Wasiir u balan qaaday mushahar 3 jibbaaran. - Allbanaadir Media
Home Warka Maanta DAAWO-Puntland oo ciidamo tababar ugu soo xirtay Xarfo & Wasiir u balan...
DAAWO-Puntland oo ciidamo tababar ugu soo xirtay Xarfo & Wasiir u balan qaaday mushahar 3 jibbaaran.
Allbanaadir Media (XARFO)-Cutubyo katirsan ciidanka difaaca Puntland ayaa maanta tababar loogu soo xiray xerada tababarada ciidanka Abqaale oo dhacda duleedka degmada Xarfo ee gobolka Mudug, halkaasi oo ay muddo tababar ku qaadanayeen.
Wasiiro katirsan Puntladn, taliyaha ciidanka Daraawiishta iyo mas’uuliyiin kale ayaa goob joog ka ahaa xiritaanka tababarkaan, waxaana ciidanka dhammaystay loo bixiyey GAMA’DIID Sida ay sheegeen xubnihii ka socdey Puntland ee goobtaasi ka hadlay.
Wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal oo hadlay ayaa sheegay in dowladdu ciidankaan maanta laga bilaabo siin doonto mushaharkoodii oo laba jibbaaran, raashin iyo adeeg dhammaystiran, inkastoo maalmo kahor ciidamo gedoodsan qabsadeen duleedka Xarfo.